Dhuxusha Sheer Kala-bixinta Kala-jarista kuleylka Yaraynta 8315 Madoobaadka Daahkeenna, Shiinaha Dhuxusha Sheer Daaha Kala-bixinta Kala-goynta Kuleylka Yaraanta 8315 Madoobaadka Soosaarayaasha Daawadeena, Shirkado, Warshad - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Daahida Dhuxusha Sheer Kala Bixinta Kuleylka Yaraynta 8315 Madoobaadka Daahkeena
QURXINTA FANCY & PREMIUN QUANLITY - Iyada oo leh naqshad jilicsan oo tayo sare leh, daahyada madow ayaa iftiimin doona qurxinta guriga waxayna abuuri doontaa jawi deggan oo qol kasta ah waqti kasta. Dharka laftiisu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan adduunka. Muuqaalka xarrago leh, waxay ku siinaysaa jawi raaxo leh oo raaxo leh qolka. Waxyaabaha waa 100% polyester, waxay caqabad ku noqon kartaa 85% -93% iftiinka iyo ray UV.
NOOCA XIRAN & KHATARTA CAADI BADAN –.waxay yihiin daah madow ama daah-furan. Miisaanka dharka waa 200gsm ilaa 320gsm. Waxay yihiin kuwo aad u jilicsan oo raaxo leh in la taabto. Ku darista qumman, qolka fadhiga, qolka caruurta iyo wixii la mid ah. Waxyaabo tayo leh oo la xushay, oo aan lahayn hems siman, iyo xakamaynta tayada adag ee waayo-aragnimo wax soo saar fiican.
SOO DHAWEYNTA THERMAL
Waxaa laga farsameeyay 100% dhar tayo sare leh oo Super Soft (Polyester, Imported). Umi qalin qalin jilicsan oo qallalan waa adkeysi iyo raaxo leh in la taabto. Dharka Teknolojiyada Triple Weave Blackout waa shey nal oo socda oo leh lakab khaas ah oo qarsoon oo xannibaya iftiinka hurdo nasasho leh. Marka waxay hubin kartaa in dadka aysan carqaladeyn doonin dibadda.